Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo ye Precision Ceramic
1. Nei uchisarudza chaiyo ceramic kuyera? (Ndezvipi zvakanakira chaiyo yekuyera zvedongo zvekuyera zviridzwa?))
Kune akawanda chaiwo ekuyera maturusi akagadzirwa negranite, simbi uye zvedongo. Ini ndichapa muenzaniso weCERAMIC MASTER SQUARES.
Ceramic Master Zvikwere zvakanyatso kudikanwa kuti zvinyatso kuyera iyo perpendicularity, mraba uye kutwasuka kweiyo X, Y, uye Z matemo emuchina maturusi. Aya maceramic tenzi mapira akagadzirwa nealuminium oxide zvedongo zvinhu, isina kurerukirwa sarudzo kune granite kana simbi.
Ceramic squares anowanzo shandiswa kutarisa muchina kuenderana, mwero uye muchina mativi. Kukwirisa zvigayo uye kukwirisa kumusoro muchina kwakakosha kune zvese zviri zviviri kuchengeta zvikamu zvako mukutsungirira uye nekuchengetedza kupera kwakanaka pane kwako. Zvikwiriso zveCeramic zviri nyore kubata ipapo granite muchina masikweya mukati memuchina. Hapana kireni inodiwa kuifambisa.
Ceramic Kuyera (zvedongo vatongi) Zvimiro:
Yakawedzerwa Calibration Hupenyu
Yakagadzirwa kubva kumberi zvedongo zvinhu zvine hushoma kuomarara, izvi zvedongo tenzi nzvimbo dzakaomarara zvakanyanya kupfuura granite kana simbi. Iye zvino unenge uine shoma kupfeka kubva uchidzokorora zvakare kuridza chiridzwa uye nekubvisa pamushini pamusoro.
Yepamberi keramiki haina zvachose isina porous uye inert, saka hapana hunyoro hwekumwa kana ngura iyo ingakonzeresa kuenzana kusagadzikana. Iko kukura kwehukuru hwezviridzwa zvemberi zvekeramiki ishoma, zvichiita kuti maceramic macares aya anyanye kukosha mukugadzira pasi nehumhu hwakanyanya uye / kana tembiricha yakakwira.
Measurement anogara achienderana nezvakakwira zvedongo zvigadzirwa nekuti iyo yekupisa yekuwedzera kwe ceramic yakadzika kwazvo kana ichienzaniswa nesimbi kana granite.
Kubata Nyore nekusimudza
Hafu huremu hwesimbi uye chetatu cheiyo yegranite, munhu mumwe anogona kusimudza nekubata zvirinani zvedongo zvekuyera. Lightweight uye nyore kutakura.
Iyi Precision Ceramic Kuyera inoitwa kuti ironge, saka ndokumbira utendere mavhiki gumi nemaviri ekuendesa.
Lead nguva inogona kusiyana zvichienderana nezvirongwa zvekugadzira.
Wagadzirira kutanga? Taura nesu nhasi kuti uwane mahara!
Epoxy Concrete, Nemazvo Granite, Precision Granite Square Mutongi, Nemazvo Granite Cube, Nemazvo Granite Surface Plate, Nemazvo Granite Kufanana,